N'ogbe CPLA Coffee Cup Onye nrụpụta na onye na-eweta |Futur
Ihe mkpuchi nwere ike imeghari maka iko espresso.Ihe mkpuchi a dị mma maka kọfị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ chocolate, ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ ịga.Emere site na CPLA, ihe a na-emegharịgharị site na osisi.Ejikwa ozi compostable mee ya.Ejiri osisi mee ya.Compostable n'ahịa ebe anabatara ya.
Emebere mkpuchi iko anyị nke ọma maka iko FUTUR, na-enye ihe dabara adaba na-enweghị ntụpọ oge ọ bụla.Anyị na-enye mkpuchi bioplastic CPLA nwere ike ime ka azụmahịa.Dị na dayameta 80mm na 90mm CPLA iko mkpuchi.
Emebere mkpuchi iko CPLA ndị a site na CPLA, bioplastic nwere ọgụgụ isi nke sitere na osisi, ọ bụghị mmanụ ma bụrụ nke agbaziri agbazi n'ụlọ ọrụ.Ihe mkpuchi a dabara na iko anyị.
Emebere ya ma mepụta ya kpọmkwem maka iko FUTUR anyị iji hụ na akara na-enweghị mgbagha oge ọ bụla.
Ụkpụrụ njikwa mma siri ike na-eme ka a na-edobe nnabata dị oke egwu ma na-ekwe nkwa na ọ ga-adaba adaba na-enweghị nkwụsị oge ọ bụla.
Emebere mkpuchi iko CPLA anyị site na CPLA, ihe omimi bioplastic nke sitere na akụrụngwa sitere na ihe ọkụkụ na-emegharị ngwa ngwa.
CPLA nwere 75% obere ihe ikuku CO2 na-arụ ọrụ karịa rọba a na-emekarị ma nwee ike ịmekọrịta ya na azụmahịa.Enyere ha ikike ịrụ ọrụ ka ọ bụrụ compostable.Ha na-enye nhọrọ iji wepụ ihe mkpofu site na mkpofu ebe ọ bụla ụlọ ọrụ compost azụmahịa dị.
Ihe mkpuchi iko iko CPLA ọhụrụ anyị emebere ergonomically iji kwalite ahụmịhe kọfị ị na-ewe.Usoro anyị na-agụnye ụdị na nha dị iche iche, gụnyere mkpuchi sipper ọcha nke nwere ogologo spout na-adịghị agbasa.
Anyị na-enye embossing omenala na agba na mkpuchi iko
FI-HL80PLA 80mm CPLA iko kọfị mkpuchi-eke Dabara iko 6/8/12S oz 1000 (20-50pcs)
FI-HL80PLA-B 80mm CPLA iko kọfị mkpuchi-oji Dabara iko 6/8/12S oz 1000 (20-50pcs)
FI-HL90PLA 90mm CPLA iko kọfị mkpuchi-eke Dabara iko 8S/10/12/16/20/24 oz 1000 (20-50pcs)
FI-HL90PLA-B 90mm CPLA iko kọfị mkpuchi-oji Dabara iko 8S/10/12/16/20/24 oz 1000 (20-50pcs)
Nha dị iche iche sitere na 80 & 90mm dabara 6 - 24 oz iko akwụkwọ.
Ihe mkpuchi ihe ndị nwere ike ịgbakọ na nke enwere ike ịmegharị ya.
Nke gara aga: Iko akwụkwọ mpempe akwụkwọ okpukpu abụọ
Osote: Ihe mkpuchi iko kọfị Bagasse